Ciidamada amaanka Puntland ee PSF oo ugu yaraan 10 looga shaki qabo al-Shabaab ku qabtay Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada amaanka Puntland ee PSF oo ugu yaraan 10 looga shaki qabo al-Shabaab ku qabtay Gaalkacyo
August 13, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Askari kamid ah ciidamada PSF Puntland oo baaraya guri intii lagu guda jiray howlgalka gaarka ah ee Gaalkacyo.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada Puntland ee (PSF) ayaa gacanta ku dhigay ilaa iyo 10 qof oo looga shaki qabo maleeshiyada al-Shabaab kadib markii ay ciidamada howlgalo gaar ah ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo shalay oo jimce ahayd.
Sarkaal katirsan ciidamada PSF oo magaciisa ka gaabsaday sababtoo ah looma ogola inuu saxaafada la hadlo ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in ay gacanta kusoo dhigeen ugu yaraan 10 qof oo looga shaki qabo kooxda al-Shabaab, kuwaasoo ku dhuumanayay meelo kuyaala xaafadaha koonfurta iyo waqooyiga ee magaalada Gaalkacyo.
Howlgalkan ugu dambeeyay ee ciidamada PSF ayaa imaanaya labo beri kadib markii howlgal ay si wadajir ah uga fuliyeen xaafada Koonfurta Gaalkacyo ciidamada PSF iyo ciidamada Danab ee dowlada federaalka Soomaaliya lagu soo qabtay shan sarkaal oo al-Shabaab ah oo uu ku jiro nin ajnabi ah.
October 22, 2016 Dagaalkii Gaalkacyo oo joogsaday, ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay